चर्चित महिला पत्रकार लंकेशको हत्या अभियोगमा हिन्दुबादी नेता पक्राउ
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १९, २०७४
प्रकाशित समय: १७:१३:४३
नयाँदिल्ली । चर्चित एक महिला पत्रकारको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा भारतीय प्रहरीले एक राजनितीज्ञलाई पक्राउ गरेको छ । उनको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै गत बर्ष केहीदिन देशैभरी विरोध प्रदशर्न भएको थियो ।
भारतीय महिला पत्रकार ५५ बर्षीया गौरी लंकेश भारतको हिन्दु राष्ट्रवादको चर्को आलोचक थिइन् । सन् २०१७ को सेम्टेम्बर ५ तारिखका दिन उनलाई कर्नाटक राज्यको राजधानी बेङगालुरुस्थित आफ्नै घर बाहिर गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
हेलमेटसहित मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिहरुले उनलाई गोली प्रहार गरेका थिए । हत्यारा खोज्नका लागि खटाइएको विषेश टोलीले शुक्रबार के.टी. नविन कुमारलाई पक्राउ गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
पाकिस्तानमा हिन्दू महिला बनिन् सांसद
श्रीमान् श्रीमती बाथरुममा मृत अवस्थामा भेटिए
किसान र गोठालाबीच झडपमा १५ जनाको मृत्यु
सुधार केन्द्रमा आगलागी हुदाँ २५ को मृत्यु
पृथ्वीको ‘नर्क’ र तमासे विश्व !
हामीसँग विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक हतियार छन् : रूसी राष्ट्रपति पुटिन